Horror ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
ဒေ့ဗ် ဝင်္ကဘာတစ်ခုတည်ဆောက်နေသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထွက် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးက တော့ Adventure Comedy Horror အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ရသပေါင်းစုံကိုခံစားချင်ရင်တော့ ဒီကားလေးက ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးတစ်ကားပါ ပြီးတော့ ဒီကားလေးက Dave MadeaMaze ဆိုတဲ့ ၁၉၈၀ လောက်က ဇာတ်ကားကို အခုခေတ် အမြင်တွေနဲ့ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီခေတ် အဲ့ဒီအခါတုန်းကလည်း ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ ဒေ့ဗ်ဆိုတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် သူ့ အသက်မွေးတဲ့ ပညာရပ်နဲ့ တခုခု ကို အသိအမှတ်ပြုခံချင်နေတဲ့သူ တနေ့မှာ သူဟာသူတတ်တဲ့ ပညာရပ်နဲ့ ဝင်္ကဘာ တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ အကြံရခဲ့ပြီး သူ့စိတ်ထဲမှာ ရူးသွပ်နေတဲ့ လူတိုင်းက သူ့ကို အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာ အမှတ်ထင်ကျန်နေခြင်တဲ့ စိတ်ရူးပေါက်မှုှုတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်မိတဲ့ အခါမှာတော့ ဒေ့ဗ် တစ်ယောက် သူလိုချင်နေတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်မလား သူတည်ဆောက်နေတဲ့ ဝင်္ကဘာကကော ဘာတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာကိုတော့
ပထမတင်ပေးခဲ့တဲ့ Watch Tower ရဲ့အဆက် ဇွန်ဘီပုရိသတ်တွေအတွက် ရင်တဖိုဖိုနဲ့ကြည့်ရမဲ့ အက်ရှင်ကားကောင်းလေးပါ Horror,Thriller ကားတွေက Rating နည်းလေ့နည်းထ ရှိပေမဲ့ ဒီကားက ၄.၇ ရထားပါတယ် ဒီဇာတ်ကားက နဲနဲလေးနိုင်ငံရေးနဲ့လည်းဆက်နွယ်နေတယ်… သတင်းထောက်သမားနှစ်ဦး က အမေရိကန်မှာ ပြန်ဦးမော့လာတဲ့ဇွန်ဘီပိုး နဲ့ပက်သက်ပြီး ဇာတ်လမ်း(သတင်း)ယူဖို့ရောက်သွားရာကနေ ဒုက္ခစက်ကွင်းထဲရောက်ရှိသွားပါတယ် တစ်ယောက်ကတော့ဘေးကင်းရာရောက်ရှိသွားပေမဲ့ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့….ဇွန်ဘီတောထဲမှာ တလည်လည်နဲ့ ဘယ်လိုရုန်းထွက်မလဲ…. ဘေးကင်းရာကို ရောက်ရှိသွားတဲ့သူကရော တကယ်ဘေးကင်းလား ဆိုတာ..ပရိတ်သတ်ကြီး ကပဲဆက်ကြည့်လိုက်ပါတော့လို့ ပြောပါရစေ….။
ဒီ Horror ကားရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်ကတော့ ကောလိပ်ကျောင်းသူချောလေး Alexပါ… ကျောင်းတွေအပြီးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Alex ဟာဆုံခဲ့ပါတယ်… တစ်ညတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညဘက်အပြင်ထွက်ပြီး သောက်ကြပျော်ကြပေါ့… အိမ်အပြန်လမ်းမှာ သူမတို့ သူငယ်ချင်းတစ်စုဟာ စိတ္တဇပညာရှင်လိုလူဆီကိုရောက်သွားကြတယ်.. ထူးဆန်းတာက Alex ဟာ အဲ့ဒီပညာရှင်ကို အိပ်မက်ထဲမှာလို အပြင်မှာလိုလိုမြင်ဖူးနေတယ်… နောက်နေ့ကျတော့ အဲ့ဒီညကဖြစ်ခဲ့တာတွေကို Alex ဟာ ဘာကိုမှမမှတ်မိတော့ဘူး…သူငယ်ချင်းတွေလည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတယ်…ဘာလို့ဆို Alex ရဲ့ ကိုယ်မှာ ကုတ်ရာခြစ်ရာ ဗရာပွနဲ့ ..ဒါ့အပြင်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေလည်း ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်…Alex ကိုယ်တိုင်ပဲ သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်…Alex ဘာတွေဖြစ်နေလဲ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပြီးဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး…
Final Destination3(2010)
Horror ကားကြိုက်နှစ်သက်သူတို့အဖို့ ကြည့်ဖူးသမျှထဲမယ် သူတို့ရဲ့ နှလုံးသည်းအူကို လှုပ်ရမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားများကို ပြောပါဆိုရင် Final Destination တွေကို ပြောကြမှာသေချာသလောက်ပါပဲ….ယ္ခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ horror ကားတော်တော်များများမှာ အထူးသဖြင့် Jump scare မျိုး ဝုန်းကနဲ ဒိုင်းခနဲ ခြောက်လှန့်တတ်တဲ့ ကားမျိုးတွေကို horror ကား ကြိုက်နှစ်သက်သူသူတို့ အဖို့ ကြာလာတော့ အနည်းငယ်ရိုးအီလာသလိုပါပဲ…….Final Destination လို horror မျိုးကျတော့လည်း တကယ့်ကို သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်တဲ့အပြင် ကျောထဲစိမ့်နေအောင် ကြောက်နေရတာမျိုး… .မင်း horror ဘယ်လောက် crazy ဖြစ်လဲဆိုတာကို Final Destination (1 to 5) ကို စဆုံးကြည့်ဖြစ်လားဆိုတာမျိုးနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရလောက်အောင် သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာပါပဲ… ယ္ခုလည်း New Line Cinema က Final Destination Reboot ကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ ဒီတော့ စဆုံးလေးကို ပြန်လည် ခံစားချင်သူများအတွက် အရည်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်…..
သရဲပုံပြင်လေးတွေနားထောင်လိုက်ရအောင်ဗျာ။Andy Nyman အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Martin Freeman လည်းအားဖြည့်ထားပါတယ်။IMDB Rating 6.7 နဲ့ Rotten tomatoes 82% ရရှိထားတဲ့ Horror,Drama ကားလေးပါ။ကြောက်စရာလည်းကောင်းသလို စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်။ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ် အပြန်အပြန်အလှန်လှန် မေးခွန်းထုတ်စရာ မေးခွန်းတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်။
ကိုယ်ဘာတွေလိုချင်တာလဲ။ဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲ။ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။ထိုက်တန်ရဲ့လား။ဘယ်နေရာတွေကပုန်းကွယ် ထွက်ပြေးနေမိလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ပြီးမေးခွန်းတွေထုတ်ချင်လာမှာသေချာပါတယ်။အဓိပါ္ပယ်ရှိသလို Horror ကားပီပီသသကြောက်ရလန့်ရအောင် တင်ဆက်ပြထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်အတုတွေကိုဖော်ထုတ်နေတဲ့ Professor Goodman တစ်ယောက်သူရဲ့ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာထူးဆန်းစွာ
ပျောက်သွားတဲ့ Professor Cameron ဆီက အဆက်အသွယ်ရပြီး သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် ၃ခုကို အတုလားအစစ်လားဆိုတာ ဖော်ထုတ်ရင်း နောက်ဆုံးမှာ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေက အစစ်အမှန်တွေလား အတုတွေလားဆိုတာ ကြည့်ရမှာပါ။နောက်ဆုံးပိုင်းမှာ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းဇာတ်သိမ်းထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ဒီကားမှာ ကြောက်ရမှာတွေ တွေးရမှာတွေအများကြီးပါပဲ။
ဒီတစ်ခါတော့ horror ကားတွေသဘောကျတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် 2019 ထွက် ကားသစ်တစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဆရာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့နှိပ်စက်မှုကြောင့် လူမမယ်သားငယ်ခရစ်ကို လက်ဆွဲပြီး တစ်နယ်တစ်ကျေးကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့တယ်… ပြောင်းလာပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူမအတွက် အရမ်းထိတ်လန့်စရာ တစ်ခုထပ်ကြုံရပြန်တယ်… အဲ့ဒါကတော့ အိမ်နီးချင်း စိတ်မနှံ့သူအဖွားကြီးရဲ့ ကြောက်ရွံဖွယ်နောက်ခံဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို သူမသိလိုက်ရတယ်… သူမ အဲ့ဒီအဖွားကြီးနဲ့ ထိတ်တိုက်မတွေ့ချင်ပေမယ့်လည်း တွေ့ခဲ့ရသလို သားငယ်ကလည်း တနေ့တစ်ခြားအမူအကျင့်တွေထူးခြားလာတယ်… . ..အဖွားကြီးက ဘာကြောင့် အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတာလဲ…. သူ့သားလေးကလည်း ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲလာတာလဲ…. horror ကားကြိုက်သူတွေ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့
ဇွန်လ ၁၁ ရက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ စေလွှတ်ခြင်းခံရတဲ့အမေရိကန်စစ်သားတပ်စုတစ်စုရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့ ကြောက်စရာအဖြစ်ဆိုးကြီးအကြောင်းရိုက်ပြထားတဲ့ ၂၀၁၈ ထွက်ရုံတင်ကားသစ်တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…Rating 7.1 ရရှိထားတဲ့ဒီကားဟာ Action , Adventure , Horror ပုံစံဖြစ်ပါတယ်… ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာ ဟစ်တလာရဲ့ဂျာမနီအင်ပါယာကိုဖျက်စီးဖို့အတွက် ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိသျှတို့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ် ဂျာမန်တို့ခြေကုန်ယူထားတဲ့ ကမ်းခြေဆီကို ရှေ့ပြေးစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဖို့ မဟာမိတ်တပ်တစ်ခုစေလွှတ်ခဲ့ပြီး သူတို့အနေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပင်မယ့်လည်း မိမိတို့ကြုံရတဲ့အရာမှာ ဂျာမန်စစ်သားတွေသာမဟုတ်မှန်းသိခဲ့လိုက်ရတဲ့အခါ မထင်မှတ်ပဲစခန်းတွင်းဝင်မိပြီး ဂျာမန်တို့စမ်းသပ်နေတဲ့အရာတွေကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ.. ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲ သူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုကျေပြွန်နိုင်ပါ့မလား လူသားမဟုတ်တဲ့အရာတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်
ကိုရီးယား မင်းသား လီဗျောင်ဟွန်း နဲ့ မင်းသားကြီး Choi Min‑sik တို့အဓိကအားပြိုင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့Crime, Drama, Horror အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။IMDb Rating(7.8/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (80%) တောင်ရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးကိုရီးယားဇာတ်ကားပါ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့….Special Agent တယောက် – လက်ထပ်တော့မယ် သူ့ချစ်သူ ကို ရက်ရက်စက်စက် တစစီခုတ်ထစ်စွန့်ပစ်ထားတာကို မြင်ခဲ့ပြီးနောက် –ချစ်သူရဲ့ အဖေ က ရဲအရာရှိ –သူ့သမီးကို သတ်သွားတဲ့သူကို မင်း ရအောင်သာရှာ …. ငါ ဘာလုပ်ပေးရ ပေးရ –Special Agent ဟာ ၂ ပါတ်တိတိ ခွင့်ယူပြီး –မသင်္ကာစရာ လူ ၄ ယောက်ကို တယောက်ချင်းစီ စစ်ရင်းမှလူသတ်သမားအစစ် ကို တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ကလဲ့စားချေမယ်ဆိုတာ –အချိန် ၁၄ ရက်အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိရက်စက်မယ်ဆိုတာ– – – – – –တစ်ခုတော့ရှိတယ်.. Family Show မရပါဘူးခင်ဗျ.. သွေးသံရဲရဲတွေ ၊စိတ်ခြောက်ခြားစရာအခန်းတွေ ပါတာကြောင့် ကြောက်တတ်ရင် မကြည့်ပါနဲ့ …(ဇာတ်ကားကိုတေ့ာ Aye Chansu မှကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။)
Primal Rage The Legend of Oh-Mah(2018)
<p>Us ဇာတ်လမ်းAdelaide ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဇာတ်လမ်းစပါတယ်။သူငယ်ငယ်က မိဘတွေနဲ့ Santa Cruz ကမ်းခြေမှာ အပန်းဖြေထွက်ရင်တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်သွားရာက လမ်းပျောက်သွားတယ်။Hall of Mirrors ထဲရောက်သွားပြီး အထဲမှာ သူနဲ့ တစ်ထေရာထဲတူတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲအတွက် Adelaide ဟာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေရပြီး တော်တော်ကြာစကားမပြောတတ်တော့ပါဘူး။မိဘတွေက ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြပြီး သူ့စိတ်ပုံမှန်ပြန်
ဖြစ်အောင် ဝိုင်းကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်ရောက်လာတော့ လင်နဲ့ သားနဲ့ဖြစ်နေပါပြီ။ ကလေး ၂ ယောက်ရနေတဲ့အထိ Adelaide က traumatic ဖြစ်နေတုန်းပါ။ သားဖြစ်သူ Jason က ကမ်းခြေသွားချင်တယ်ဆိုလို့ မသွားချင်သွားချင်နဲ့ လိုက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်နေတုန်း။ ညကျတော့ သူ့ယောင်္ကျားကို သူငယ်ငယ်ကအကြောင်း ပြောပြတယ်။ အဲဒီ သူနဲ့တစ်ပုံတည်းဖြစ်နေတဲ့ ကောင်မလေးက သူ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့ ရောက်လာတော့မယ်လို့ ခံစားနေရ
တယ်ဆိုပြီး။ မကြာပါဘူး သူတို့မိသားစုနဲ့ တစ်ပုံထဲတူတဲ့ လူတစ်အုပ်ရောက်လာ ခဲ့သောအခါမှာတော့&hellip;.(ရုပ်ရှင်အညွှန်းအား DatShin Page မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ )(စပွိုင်လာဖြစ်မှာစိုး၍ ပိုစ်အား အနည်းငယ်ဖြတ်တောက်ထားပါသည်)</p>
မာ့ခ်, အီနာ နဲ့ ဟယ်လင်တို့ဟာ ခရီးသွားဗီဒီယို ဘလော့ဂါ အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အန္တရာယ်တွေကြုံရပေမယ့် သူတို့တင်ပေးတဲ့ ဗီဒီယိုတွေမှာ ကြည့်ရှုသူများရင် ပျော်နေတတ်ကြတာပါ။
ဒဏ္ဍာရီတွေထဲက မြို့ ယုံတမ်းစကားတွေ အများကြီးနဲ့မြို့ ရှေးရိုးစွဲအယူအဆနဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ ကာဆာ ဘလန်ကာကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာ…
သူတို့ကြုံရတဲ့ ထူးခြားဆန်းကြယ်မှုတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုသူတွေ အများကြီးနဲ့ အောင်မြင်ဖို့တွန်းပို့ပေးတော့မှာပါ။
သူတို့ပေးဆပ်ရခဲ့တာတွေနဲ့ကော တန်ရဲ့လား?blair witch project ကစခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ့် Found footage ပုံစံ နောက်တစ်ကားပါပဲ။
နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ As above, so below တို့ V/H/S တို့လိုကားတွေကို သိရင် ဒီကားကလဲ သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။
ဒီအမျိုးအစားထဲကပဲလာပြီး အဲ့ဒီလိုကားမျိုးတွေကို ပြန်လှောင်နေတာတွေ
သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းအတည်ပေါက်နဲ့ပြောနေတာလေးတွေ ရယ်ရတယ်။
mmbusticketတက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခရဒ်နဲ့ သူ့ရဲ့တပည့် ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသား ဆန်ဂျေးတို့ဟာ ရှေးဟောင်းဘာသာစကားနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာမူတစ်ခုကို ကြိုးစားပြီးဘာသာပြန်နေကြပါတယ်။ တစ်ညတော့ ဆန်ဂျေးက ဘာသာပြန်လို့ရသွားပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဆရာမကို သူ့အိမ်လာခဲ့ဖို့ လှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရဒ်ရောက်မလာခင်မှာပဲ ဆန်ဂျေးဟာ ပဟေဠိဆန်စွာ ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါ ရဒ်ဆီကို ပါဆယ်တစ်ပုံးရာက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပို့တဲ့သူက ဆန်ဂျေးဖြစ်နေတဲ့အခါ ရဒ်က ပါဆယ်ပုံးထဲက သဲလွန်စတွေနဲ့ ဆန်ဂျေးကို ပြန်ရှာတွေ့နိုင်မလားဆိုတာကတော့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ ဆက်လက်ရှုစားကြပါ
သရဲကား တောင့်တနေကြတဲ့ CM Fan တွေအတွက်သရဲကား တစ်ကား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်….နယ်မြို့လေးထဲက အိမ်ကြီး တစ်အိမ်အဲ့ဒီ အိမ်ထဲက အပေါ်ဆုံး ထပ်မှာသော့ခတ်ထားတဲ့ အခန်းတစ်ခုလဲ ရှိနေလေရဲ့
တစ်ခါ တစ်ခါ အသံတွေ ကြားပြီး အိမ်ထဲ လျှောက်သွားနေတဲ့အရိပ်တစ်ခုလဲ ရှိနေပြန်တယ်….အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကို မျက်စိမမြင်တဲ့ အဖွားကြီး နဲ့နားမကြားတဲ့ အစေခံ တစ်ယောက်က စောင့်ရှောက်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်….တစ်ရက်မှာတော့ မြို့ကြီးက
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာအိမ်က သဘောတူထားတဲ့ ယောင်္ကျားကို မယူချင်တာနဲ့အဖွားဖြစ်သူ ရှိတဲ့ နယ်မြို့လေးကို ပြေးလာခဲ့တယ်…သူရောက်လာခဲ့တာကတော့သော့ခတ်ထားတဲ့ အခန်းရှိနေတဲ့အိမ်ကိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်….ဒီရုပ်ရှင်ကားကို Dolly Dolly က ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်
အမေရိကန်မြို့တစ်မြို့ရဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ခရစ်ယာန်သီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါတယ်။ ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ အဲဒီ့ကျောင်းကို ပြင်ပလောကက ရောက်လာတဲ့မိန်းခလေးတိုင်းကတော့ အားလုံးကိုယ်ဝန်လေးတွေ လွယ်ထားကြရတာပါပဲ။ ဘာလို့ကိုယ်ဝန်သည်မိန်းခလေးတွေ ဘာကြောင့်ရောက်လာကြတယ်၊ သီလရှင်ကျောင်းကကော ဘာတွေလဲဆိုတာကိုတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ကော်ဖီမွှေးမွှေးလေးတစ်ခွက်နဲ့ မိုးအေးအေးမှာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လားဗျာ
လာယိုရို့နာရဲ့ကျိန်စာ ဆိုတဲ့ သရဲကားကို တင်ပေးထားပါတယ် ဒီကားလည်း Conjuring, Anabelle universe မှာ ပါဝင်ပါတယ်။ လာယိုရို့နာဆိုတာ မက္ကဆီကိုက သိပ်ကိုချောမောတဲ့ မိန်းမလှလေးပါ။ သူ့ခင်ပွန်းရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ကလေးနှစ်ယောက်ကို ရေနှစ်သတ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ရေထဲခုန်ဆင်းသွားခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ အစွဲနဲ့အကုသိုလ်ကြောင့် မိစ္ဆာဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီး သူ့ကလေးတွေအဖြစ်အစားထိုးဖို့ ကလေးတွေရဲ့ အသက်ကို လိုက်နှုတ်ယူနေတာပါ။
သားသမီးကိုချစ်တဲ့ မိဘတွေရှိကြလား။ မိဘကိုချစ်တဲ့ သားသမီးတွေရောရှိကြလား။ အချစ်လွန်ရင် နှစ်ရာရောက်တယ်တဲ့။ ဒီကားလေးက
အဲ့စကားပုံကို မီးမောင်းထိုးပြနေသလိုပါပဲ။ အမျိုးအစားခွဲရင်တော့ ဆိုင်ကို ဆန်ဆန်လူသတ်ကားပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုကြောင့်သတ်ဖြစ်သွားလည်း
အဖေဆိုတာ ဘယ်လိုတာဝန်ယူရလဲ။ အမေနဲ့ကိုယ့်သားကိုယ်ကို ဘာလို့နှိပ်စက်ရတာလဲ။ ဘာကြောင့်နှိပ်စက်ချင်ရတာလဲ အဲ့ခံစားချက်တွေကို
သိချင်နေတဲ့သူက Evens ။ သူငယ်ငယ်ကလည်း အနှိပ်စက်ခံရလို့ သူ့လို အနှိပ်စက်ခံရတဲ့သူဆို စာနာအားပေးတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စေတနာက
Blood line ဆိုတဲ့နာမည်လေးအတိုင်းပဲ မျိုးရိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ Even ရဲ့အမေကရော ဘယ်လိုအမေမျိုးဖြစ်မလဲ ။ သေချာတာကတော့
သူ့သားကိုအရမ်းချစ်တဲ့ အမေတစ်ယောက်ဖြစ်မှာတော့အမှန်ပါပဲ။ ခံစားချက်တွေရောထွေးလွန်းတဲ့ကားလေးမို့ မပျင်းရတဲ့ကားလေးဖြစ်မှာအမှန်ပါ။
ခံစားကြည့်ပါဦးနော် ။ ။
Horrorဇာတ်လမ်းတွေကိုမှကြိုက်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ ဖရီဒရီကိုအသတ်ခဲ့ရမှုနဲ့ ဖရန်ချက်စ်ကာနဲ့မက်စီတို့နှစ်ယောက်ကို ရဲအရာရှိတွေကစစ်မေးခဲ့ကြတယ် ဖရီဒရီကိုက ဖရန်ချက်စ်ကာပတ်သတ်ဖူးခဲ့တဲ့ ယောကျ်ားလေးတွေထဲတစ်ယောက်ပေါ့ ဖရန်ချက်စ်ကာဆီကိုထူးဆန်းတဲ့ ဆိုဖာရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဆိုဖာကဘာတွေထူးဆန်းလဲ နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကြည့်ရှု့ရမှာပါ Horrorကားကြည့်တဲ့သူတွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ
သင်္ချ ိုင်းထဲက သရဲ (Ghost in the Graveyard) ဆိုတဲ့ Horror ဇာတ်ကားသစ်လေးတစ်ကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ၂၀၁၉ ထွက်ဖြစ်ပြီးတော့ IMDb – 6.1/10 ရရှိထားပါတယ် မှောင်ရီပျိုးစ တစ်ညနေမှာ ကလေးတစ်အုပ်စုဟာ သုဿန်တစ်စပြင်ထဲမှာ တူတူပုန်းတမ်း သွားဆော့ရင်း ပြေးကြလွှားကြနဲ့ မာသာ ဆိုတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ဦးဟာ လူသေမြှုုပ်တဲ့ ကျင်းဟောင်းတစ်ခုထဲကို မတော်တဆ ပြုတ်ကျပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် …. မာသာဟာ ဆယ်လီဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ ဆယ်လီရဲ့ ညတိုင်းအိပ်မက်တွေထဲမှာ မာသာဟာ အုတ်ဂူတွေကြားထဲမှာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ပြေးလွှားနေတာကို မြင်တွေ့နေရပါသတဲ့ နှစ်တွေကြာလာခဲ့ပေမယ့် သင်္ချ ိုင်းမှာ မာသာဆိုတဲ့ကောင်မလေး ခြောက်လှန့်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကတော့ ပျောက်ပျက်မသွားခဲ့ပါဘူး…မာသာသေဆုံးမှုနဲ့ ဆယ်လီနဲ့ ဘယ်လိုများ ပတ်သက်မှုှရှိလဲ…စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းသလို တစ်စိမ့်စိမ့်ကြောက်နေရတဲ့ ကားမို့ Horror ကြိုက်ပြိတ်သတ်တို့အဖို့ ခံစားကြည့်ကြပါဦး…
မူးယစ်ဆေးတွေသုံးပြီး ဘဝကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်သုံးယောက် သူတို့မြို့ကိုအသစ်ပြောင်းလာကြသည့်မိသားစုတစ်စုရဲ့အိမ်ကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ရာမှကံဆိုးစွာနဲ့ ထိုမိသားစုမှာသာမန်မိသားစုမဟုတ်ပဲစုန်းမိသားစုတစ်စုဖြစ်နေသည်… ထိုစုန်းမိသားစုနဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေ့ဆုံအပြီး မကြာမီမှာထိုဆယ်ကျော်သက်အဖွဲ့ထဲမှ တစ်ဦးတည်းသောကောင်မလေးဖြစ်သည့်ကယ်ရီမှာကိုယ်ဝန်ရှိလာပြီး သူ့ရဲ့ကလေးကို စုန်းမိသားစုတို့ယဇ်ပူဇော်မည့်အစီအစဉ်တွေကိုသိသွားသောအခါ…ဒါ့အပြင် ထိုယဇ်ပူဇော်မည့်အစီအစဉ်ကို အဓိကတာဝန်ယူထားရတဲ့စုန်းမိသားစုမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ စုန်းအတတ်ပညာတွေတတ်မြောက်ထားသည့်ဒေးဗစ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးမှာလဲထိုကယ်ရီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကို မေတ္တာသက်ဝင်သွားသည့်အခါ…သူချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုပဲကာကွယ်ပေးမလား၊ဒါမှမဟုတ် သူ့ကိုပြုစုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့စုန်းမိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲဆက်နေမလား…ထိုစုန်းမိသားစုကရော ဘာကြောင့် ထိုယဇ်ပူဇော်မှုတွေကိုလုပ်နေရတာလဲ…ဘယ်သူ့ကိုပူဇော်ပသနေရတာလဲ…ထိုယဇ်ပူဇော်မှုတွေကိုမလုပ်ရင် သူတို့ဘာတွေဖြစ်သွားမှာလဲ…ဒါ့အပြင် ဒီ “Blood Bound” ကားမှာ တခြားကားတွေလိုJump Scares တွေအများကြီးမသုံးထားပဲနဲ့ကိုထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်အောင်ရိုက်ပြထားပါသေးတယ်…ဒါကြောင့်မို့ ဒီကားလေးကိုအခုပဲကြည့်ရှုခံစားကြည့်ပါဦး
ဒီတစ်ခါဇာတ်ကားလေးကတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုလူသတ်ကားပုံစံလေးပါဆပ်ကပ်တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ရိုနီကသူ့ရဲ့မိန်းမဆာဗန်နာကို ယောကျ်ားတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာတွေ့သွားခဲ့တယ်ရိုနီကအဲ့ကောင်ကိုသတ်ပစ်လိုက်တယ် ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ဆာဗန်နာကအောက်လမ်းအစီအမံတွေနဲ့ ရိုနီတို့အုပ်စုကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါသူမမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာရောလေရိုနီတို့အဖွဲ့ဟာမုန်တိုင်းတွေထန်လေဆင်နှာမောင်းတွေတိုက်ပြီးသူတို့သွားလိုရာနေရာကို လေဆင်နှာမောင်းပုံစုံလုပ်ပြီးမြေပြင်ပေါ်ရောက်လာကြတာပေါ့သူတို့က စိတ္တဇလူသတ်သမားဆန်ဆန်လူတွေကိုလိုက်သတ်ကြတာပေါ့ရိုနီက သူ့ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့ဆာဗန်နာကိုလိုက်ရှာပြီးသတ်တော့တာပေါ့အဲ့အဖြစ်အပျက်ထဲမှာ ဒုက္ခတွေ့နေရတဲ့လူတစ်စုလည်းပါတာပေါ့သူတို့အဲ့ဒီထူးထူးဆန်းဆန်းလေဆင်နှာမောင်းကိုရပ်သွားအောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲသူတို့ဒီလိုစိတ်ပျက်စရာအခြေအနေကနေဘယ်လိုရုန်းထွက်ကြမလဲသွေးတန်းရဲရဲသတ်ဖြတ်တဲ့အခန်းတွေကိုအားပါးတရကြည့်ရှု့ရမှာပါ
၂၀၁၉နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကထွက်ထားတဲ့ Psychological Horror film လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ၊
အစိုးရကိုပုန်ကန်ဖို့မပြောနဲ့ စကားတောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြောရဲလောက်အောင် အုပ်စုဖွဲ့တာတွေတားမြစ် ၊
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဖီဆန်မယ့် သဘောသဘာဝတွေပါတဲ့စာအုပ်စာပေတွေ ၊ လူငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေ ဖတ်ခြင်းရေးခြင်းကိုလဲ သေဒဏ်ပေးတဲ့အထိကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်….
လွတ်လပ်ရေးမြတ်နိုးတဲ့ကျောင်းဆရာလေး ကျန်းမင်ဟွေက တိတ်တဆိတ်စာအုပ်အသင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းထားခဲ့တယ်…
တစ်နေ့မှာ စာအုပ်အသင်းထဲကကျောင်းသားဝေကျုံးထင်နဲ့ စီနီယာအတန်းကကျောင်းသူဖန်ရေ့ရှင်းတို့ သူတို့ကျောင်းကြီးထဲပိတ်မိရာက
Psychological Horrorဆိုတဲ့အတိုင်း သရဲတွေချည်းပြူးပြူးပြဲပြဲခြောက်တာမဟုတ်ပဲ ၊
ဘာတွေလဲ ဘာတွေလဲဆိုတဲ့ ? မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဇဝေဇဝါ အလန့်တကြားလေးကြည့်ရမယ့်ကားလေးမို့လို့
ရသအသစ်တစ်ခုခံစားရစေဖို့မျှော်လင့်ရင်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
(အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Myint Myat Thinn ဖြစ်ပါတယ်)
ဒါပေမယ့် ရိုင်လေနဲ့ သူမရဲ့ကောလိပ်ကညီအစ်မတွေ
ရိုင်လေတို့အဖွဲ့က ခရစ္စမတ်ညမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်
ရိုင်လေတို့အဖွဲ့မှာ ဘယ်သူတွေကအသက်ရှင်ပြီး လွတ်မြောက်ခဲ့မလဲ…..
၂၀၁၉ ခုနစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Horror/ Drama / Mystery အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်…
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ နိုဗက်ဟာ ကယ်လီဖိုနီးယားပြည်နယ်
ဘာဘလီဟေးမှာ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ပါတယ်…
တစ်ရက်မှာတော့ သူငါးနှစ်သားကတည်းက ထွက်သွားတဲ့
သူ့ကိုလာတွေ့ဖို့ ရေးထားတဲ့ စာတစ်စောင်ရောက်လာပါတယ်…
နိုဗယ်လည်း သူ့အဖေကိုတွေ့ဖို့ရာ ခရီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်
တစတစနဲ့ သူသိလာရတဲ့ အတိတ်အပိုင်းအစတွေက
IMDB 6.1 /10 ရရှိထားပြီး Lords Of the Rings ရဲ့ မင်းသားချော Eijan Woods ကပါဝင်ထားပါတယ်.
rating ကောင်းကောင်း Imbd-7.0 ရရရှိထားတဲ့ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ကားလေးပါ……………..
တင်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သရီဆာတစ်ယောက် ဗန်ပိုင်းယားနဲ့တည့်တည့်တိုးပြီး
နောက်နေ့မနက်မှာ သူကိုယ်တိုင် ဗန်ပိုင်းယားဖြစ်သွားပါတယ်…
အဲ့မှာ အလီဆန်နဲ့သူ့ချစ်သူဟောင်း တိုနီတို့က
အလီဆန်က သူမကို မျက်စိကျပြီး နောက်ယောင်ခံ လိုက်ရာကနေ ခင်သွားကြပါတယ်……….
ဗန်ပိုင်းယားလောကကြီး အကြောင်းကို သရီဆာ တစ်ယောက် ပိုသိလာခဲ့ပါတယ်
ဒီကားကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးထားပြီးတော့ ဇာတ်လမ်းဟာဆိုရင်
အပေါစားဆန်မနေပဲနဲ့တကယ့် ဗန်ပိုင်းယားတွေရဲ့ အနှစ်အရသာကိုခံစားနိုင်မဲ့ကားလေးပါ
အော်စကာဆိုတဲ့ (၁၂) သားကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းမှာ အမြဲအနိုင်ကျင့်ခံနေခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ နာကျည်းမှု့တွေ ၊ ဒေါသတွေကို မြိုသိပ်ခဲ့ရတာ များလာတော့ သူ့ကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ သူတွေကို လက်စားခြေဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာဖွေနေပါတော့တယ်။ မှု့ခင်း သတင်းစာတွေက လူသတ်မှု့အကြောင်းတွေ ဆုပ်ဖြဲသိမ်းထားပြီး ဘယ်လို လူသတ်လဲဆိုတာ လေ့လာတယ်။ ဘယ်လိုသတ်မလဲဆိုတာ လေ့ကျင်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ အဲလီဆိုတဲ့ အိမ်နီးချင်း ခပ်ချောချော ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ အဲလီတို့ဟာ ဒီမြိုကို ပြောင်းလာခဲ့ကြတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ အနှိမ်ခံတွေဆိုတာ အဖော်မင်တက်တဲ့ လူစားတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အစပိုင်းမှာတော့ အဲ့လီက သူနဲ့ သူငယ်ချင်း မဖြစ်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရက်တွေကြာလာတဲ့ အခါမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ခင်မင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရင်းနှီးလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောက်ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို တစ်ယောက် သိမြင်လာကြပါတော့တယ်။ အော်စကာ က သူ့ကို အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေကို လက်စားပြန်ခြေနိုင်မှာလား။ အဲလီကရော ဘယ်လိုလူစားလဲ။ ဘာလို့ သူနဲ့ သူငယ်ချင်း မဖြစ်ချင်ရတာလဲ။ စတဲ့ လျှိုဝှက်ချက်တွေ အခက်အခဲတွေ သူတို့ နှစ်ဦးကြားက သံယောဇဉ်တွေကို ကြည့်ရှု့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကြန် အတွင်း အိမ်တွင်းပုန်းနေတဲ့ CM Fan တွေ ပျင်းနေမှာဆိုးလို့အိမ်တွင်းပုန်း ဘာသာပြန် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ThinZar Htet ကနေကိုရီးယား သရဲကား တစ်ကားကို ပြန်ပေးလာပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ဖြစ်လို့ အန်းဒိတ်ဖြစ်သွားပြီလို့ယူဆရပေမယ့် ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ဆိုသလိုပဲ ဇတ်လမ်းအစကနေ အဆုံးထိ သင့်ကို ဆွဲခေါ်သွားမှာပါပြီးတော့ ကြိုသတိပေးချင်တာကတော့ဒီဇတ်လမ်းဟာ Uncut Version ဖြစ်လို့Adult ပါလို့ သတိပေးထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင် မိသားစု နှင့် အတူမကြည့်သင့်ပါလိင်ဆက်ဆံ တဲ့ အခန်းမျိုး အနည်းငယ်ပါဝင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အကြောင်းကို စပွိုင်လာ မလုပ်ပဲ ဇတ်လမ်းအစလေးကိုပဲ ဖော်ပေးချင်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဟာပုံမှန်ရထားစီးဖို့ ရထားဆိုက်ကပ်မယ့် ဘူတာကိုရောက်လာပါတယ် ဒီလိုနဲ့ ရထားစောင့်နေရင်းဖိနပ်နီနီလေး တစ်ရံကို တွေ့လို့ ကောက်စွပ်ကြည့်တဲ့အခါသူမ နဲ့ လုံး၀ ကို ကွက်တိဖြစ်နေပါတယ်…ဒါပေမယ့် နောက်မှ ရောက်လာတဲ့ သူမ ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ဒီဖိနပ်ကို အရင်တွေ့တာ ဆိုပြီး အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆိုတာတွေ မေ့ပြီး လုယူသွားပါတယ်ဒီလို လုတဲ့အတွက် ကောင်မလေး ဟာ ရထားလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုတောင် ပြုတ်ကျမလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်သူမ ရဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ ဖိနပ်ကို ရလို့ စိတ်ကျေနပ်ပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်….
သရဲကားကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်အတွက် ဒီနှစ်ထဲမှာ ထွက်ထားတဲ့ပရိသတ်တော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားတဲ့ The Conjuring နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီကားက ၁၉၇၁ ခုနှစ်က Rhode Island မှာရှိတဲ့အိမ်မှာ ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တာကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းပါ။ဒီအိမ်ကြီးက ယနေ့တိုင် ရှိပြီး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များလည်ပတ်စရာ နေရာအဖြစ်ရှိဆဲပါ။ပရောဂဆရာမ Lorraine Warren နဲ့ သူ့အမျိုးသား Ed Warren တို့ဟာCarolyn and Roger Perron တို့ မိသားစု (သမီး ၅ယောက်နဲ့အတူ) ဒီအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးကတည်းက ခြောက်ခြားစရာတွေ ဆက်တိုက်လိုကြုံတွေရတာတွေကို ကူညီပေးရင်း ဘဝတစ်ပါးသို့မကူးပြောင်းဘဲ အိမ်မှာ ကျန်ရစ်နေတဲ့ ဝိဉာဏ်ဥစ္စာစောင့်နတ်ဆိုးက မိသားစုဝင်အားလုံးကို ဘယ်လိုအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်၊ ထိတ်လန့်မှုတွေပေးတယ်၊ နောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသည်အထိ ဒုက္ခပေးလာတယ် ဆိုတာ ရိုက်ပြထားတာပါ။ဇာတ်လမ်းအစမှာထဲက အရုပ်တရုပ်ကထူးဆန်းစွာ သွားလာပြုမူနေတာကို ရှုစားရမှာပါ။ဒီအရုပ်က အပြင်မှာ တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ အရုပ်ပါပဲ။သရဲကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တခါးက သူ့အလိုလို ဝုန်းခနဲ ပိတ်သွားတာ၊ သူ့အလိုလိုတအိအိ ပွင့်သွားတာမျိုး၊ အိပ်နေရင်း တယောက်ယောက်ကခြေထောက်ကို ရုတ်တရက် စောင့်ဆွဲသလိုမျိုး ပြကွက်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။ဒီကားရဲ့ အဓိက ထူးခြားချက်ကတော့ လက်ခုပ်တီးတာပါပဲ။ကြည့်ရှုသူ ပရိသတ်တော်တော်များများ မျက်စိထဲမှာစွဲကျန်အောင် လက်ခုပ်သံရဲ့ ခြောက်ခြားစရာကောင်းပုံကို ရိုက်ပြနိုင်တာကဒီကား ဒါရိုက်တာ တော်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။Rated R ဆိုပေမဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာ သမီးရည်းစားခန်းအဖော်အချွတ်ခန်း တစ်ခန်းမှ မပါပါဘူး။သာမန်ရိုးရှင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပါပဲ။စုန်းမပူးတဲ့အခန်းတွေ၊ သွေးထွက်သံရဲရဲဇာတ်ကွက်တွေကဇာတ်သိမ်းပိုင်းနားမှာအတော်လေးပါတာမို့ အသက် (၁၈)နှစ်အောက်မကြည့်သင့်တဲ့စာရင်းထဲ ဝင်သွားတာပါ။မိသားစုတူတူကြည့်ဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ဇာတ်စ၊လယ်၊ဆုံး ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။အဆုံးပိုင်းကို သိပ်သဘောမတွေ့ပေမဲ့ရိုက်ချက်တွေက အတော်ကောင်းတာမို့လူကြိုက်များတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ရုံမှာကြည့်ရမယ့်ကားဆိုပေမယ့်ထွက်ထားတာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့အခွေထွက်ရင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဒီဇတ်လမ်းမှာတော့ နာမည်ကျော် အန်နာဘယ် အရုပ်ကိုလော်ရိန်း တို့ ဇနီးမောင်နှံက နောက်ဆုံးအခြောက်လှန့်ခံရတဲ့သူတွေဆီကနေ တောင်းယူလာပြီး သူတို့ အိမ် အောက်ထပ်ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကို အစီအရင်တွေနဲ့ ချူပ်နှောင်တဲ့အခန်းမှာပဲမှန်သေတ္တာနဲ့ သော့ပိတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်…. လော်ရိန်းမှာ ဂျူဒီ ဆိုတဲ့ သမီးလေး တစ်ယောက် ရှိပြီးဂျူဒီဟာလဲ လော်ရိန်းလို မွေးရာပါ စိတ်စွမ်းအင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏ ဆိုသလို သေပြီးသားလူတွေကို ခဏခဏ မြင်ရတက်ပါတယ်တစ်ရက်မှာတော့ ဝါရန်း လင်မယားဟာ အမှုကိစ္စတစ်ခုအတွက်ခရီးတစ်ခု ထွက်ရမှာဖြစ်လို့ သမီးလေး ဂျူဒီ ကို ကြည့်ရှုဖို့အရင်ကလဲ ခေါ်နေကြဖြစ်တဲ့ ကလေးထိန်း အချိန်ပိုင်းလုပ်တဲ့သက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ မယ်ရီအယ်လန် ကို အိမ်ခေါ်ပြီးအပ်ထားခဲ့ကြတယ်..ဒီကြားထဲမှာပဲ ပရလောက ကိုစပ်စုတက်တဲ့ဒန်နီရယ် ဆိုတဲ့ မယ်ရီ ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးကဝါရန်းမိသားစု ရဲ့ လျို့ဝှတ်ခန်းဆိုတာကို ကြားပဲ ကြားဖူးပြီးအရမ်းအင်မတန် ရောက်ချင် တွေ့ချင်စိတ် ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် ကလေးထိန်း လုပ်နေတဲ့ မယ်ရီကို ကပ်ပြီးဂျူဒီလေး ရဲ့ မွေးနေ့ကို အကြောင်းပြကာ ဝါရန်း အိမ်ကြီးသို့မရရအောင် ဝင်လာခဲ့ပါတယ်…..
ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ တော်တော် ရင်ဖိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးပါ။အစပိုင်းကနေ အဆုံးထိ သင့်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲငင်သွားမှာပါ။ဇာတ်လမ်းကတော့ Hunterဆိုတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ဘဝကိုအခြေတည်ပြီးရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။Hunterကတော့ လုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့ သူချမ်းသာမိသားစုက လူတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ သတို့သမီးအသစ်လေးပါ။သူမက လက်ခံမှုရှိပြီး ညင်သာတဲ့ မိန်းကလေးပါ။ဒါပေမယ့် Hunterက သူမရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ခြောက်ကပ်ကပ် ခေတ်မီအိမ်ကြီးထဲမှာအဆုံးမရှိတဲ့သစ်တောကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း ကုန်ဆုံးရတယ်။အဲ ပြဿ နာတွေကတော့ Hunter တစ်ယောက် သက်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစားစရာလိုမြိုချချင်တဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ ရှိလာတဲ့အခါမှာ စတော့တာပါပဲ။ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားကတော့ Drama/Thriller ပါ။စိတ္တဇသည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းကို လှလှပပလေးရိုက်ကူးထားမို့thriller ချစ်သူတွေအတွက် ဒီရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို ဒါရိုက်တာ Braden Croftကရိုက်ကူးထားပြီးသည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ဂန္တဝင်မြောက်လက်ရာတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်တဲ့ခေတ်သစ်သည်းထိတ်ရင်ဖိုအနုပညာလက်ရာတစ်ခုလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။True fictionဆိုတဲ့ အမည်အတိုင်းဒီရုပ်ရှင်ဟာ စိတ်ကူးယဥ်ဝတ္ထုလောကကို အခြေတည်ထားတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ Avery Maloneလို့ခေါ်တဲ့ အထီးကျန်စာကြည့်တိုက်မှူးလေးကစာရေးရာမှာ စိတ်အားထက်သန်ပြီး သည်းထိတ်ရင်ဖိုဝတ္ထုတွေကိုရေးတဲ့စာရေးဆရာ Caleb Conradကို သူမရဲ့ Heroအဖြစ် သဘောထားပါတယ်။သူမက Calebအတွက် လက်ထောက်တစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးရလာခဲ့တယ်။ဒီတော့ Averyဟာ လူထုကိုမျက်နှာမပြဖူးတဲ့ သူမရဲ့Heroနဲ့ တွေ့ဆုံပါတော့တယ်။Calebက လက်ထောက်အလုပ်မဟုတ်ဘဲ ကစားပွဲတစ်ခုမှာကစားသူအဖြစ် ပါဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာAveryက မဆိုင်းမတွ လက်ခံလိုက်တာပေါ့။Calebက ကစားပွဲကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုတွေ၊ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမေးခွန်းတွေနဲ့ စတင်ပြီးAveryရဲ့ အကြောက်တရားကို ထိန်းချုပ်စမ်းသပ်ပါတော့တယ်။လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲကြောင့်လက်တွေ့ဆန်မှုကနေ ရူးသွပ်မှုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလာတဲ့နောက်မှာတော့ဘာတွေ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ဒီသည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်က ပရိသတ်ကြီးကို မေးခွန်းတွေအများကြီးနဲ့ ကျန်ရစ်စေမှာပါ။ကြည့်နေရင်း ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ မခန့်မှန်းဘဲနေနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်တရားနဲ့ စိတ်ကူးယဥ်မှု၊ ဇာတ်လိုက်နဲ့ လူဆိုး ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေက တည်မြဲနေပါ့မလား။အဆုံးသတ်က ခန့်မှန်းထားသလိုဖြစ်လာမလား။စိတ္တဇဆန်ဆန် ခြောက်ခြားမှုတွေ၊ အထိတ်တလန့် ရင်ဖိုမှုတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူhorrorပရိတ်သတ်ကြီးကို ဒီရုပ်ရှင်က စိတ်ပျက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီကားက​တော့ နှင်းလူသားနဲ့ ရှာ​ဖွေ​ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အ​ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ရှာ​ဖွေ​ရေးအဖွဲ့တစ်ခုက ​တောင်တစ်ခုမှာ ရှားပါးတဲ့အပင်​ဟာ ​ဆေးဖက်ဝင်တယ် ဆိုတာကို သိရှိပြီး ​နောက်မှာ အဲ့​တောင်​ပေါ်ကိုသွား​ရောက် ရှာ​ဖွေကြပါတယ်။ အဲ့​တောင်​ပေါ်မှာ နှင်းလူသားရှိပြီး အဲ့သတ္တဝါဟာ သူ့နယ်​မြေကိုကာကွယ်ပြီး လူ​တွေကိုနာကျင်​အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရှာ​ဖွေ​ရေးအဖွဲ့က အဲ့​တောင်​ပေါ်က စခန်းတစ်ခုထဲ​ရောက်ပြီး သူတို့​ရှေ့က ​ရှာ​ဖွေသူ​တွေရဲ့ မှတ်တမ်း​တွေ အသံဖိုင်​တွေကို​တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့မှတ်တမ်း​တွေက သူတို့ကို အဲ့အပင်ပိုမရှာကြဖို့ ရှာ​ဖွေ​ရေးဆပ်မလုပ်ကြဖို့နဲ့ အန္တရာယ်ရှိ​ကြောင်းသတိ​ပေးထားပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်သူတို့က ဂရုမစိုက်ပဲ ဆက်လုပ်​ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့မှာ လူ ၅ ​ယောက်ပါပြီး ​​ဒေါက်​တာ စမစ်ဆိုသူက​တော့ အပင်​တွေအ​​ကြောင်းကို ၂ နှစ်​ကျော်​လေ့လာခဲ့ပြီး သူမဟာ ဦး​နှောက်ကင်ဆာ ခံစား​နေရသူပါ။ အဲ့​ကြောင့် သူမကိုယ်တိုင်ရှားပါးအပင်ကို သုံးကြည့်ပြီး အကျိုးသက်​ရောက်ရင် ကမ္ဘာ​ပေါ်က အသက်​ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ချင်သူပါ။ ဒါ​ပေမယ့် အဖွဲ့ထဲမှာ သ​ဘောထားမတူညီမှု​တွေ၊ အ​ပြောင်းအလဲများစွာနဲ့ ​​နောက်ဆုံးထိ ဘယ်သူ​တွေအသက်ရှင် ကျန်ရစ်မလဲဆိုတာကို ​ထိတ်လန့်ဖွယ်ကြည့်ရှူရမယ့် ဇာတ်ကား​​ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိန္နဲသီး သရဲကားဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ ထိုင်းသရဲကားဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်သရဲကားတွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ တွေ့နေကြ သရဲကားတွေထက် ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ဟာသတွေ ပါတယ်….ကြောက်လန့်စရာတွေ ပါတယ်….ကြည်နူးဖွယ်ရာတွေပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ တရားသဘောနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အယူအဆလေးတွေ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ရသစုံတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ ထူးခြားတဲ့ ဆက်တင်, Effect, ဇာတ်ဆောင် တွေမပါဝင်ဘဲ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကို အကောင်းဆုံးတင်ဆက်သွားနိုင်တာကိုတော့ မြန်မာဇာတ်ကားဖန်တီးသူတွေ အတုယူသင့်ပါတယ်။ကျွန်တော့်လို သရဲကား မကြိုက်တဲ့လူမျိုးတောင် နှစ်ခါလောက် ပြန်ကြည့်မိပါတယ်။ သရဲကားကို ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်…ထိုင်းကားကို ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် ကြည့်သင့်တဲ့ ထိုင်းသရဲကားလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဒီကားလေးက 2010မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး R rated horror, thriller အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် CM ရဲ့ thriller ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Ogden Marsh မြို့မှာ လူတစ်ချို့ ထူးဆန်းတဲ့အမူအကျင့်တွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာကို ရဲမှူး David နဲ့ သူ့အမျိုးသမီး ဆရာဝန်တို့က တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒိနောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့ တစ်မြို့လုံးက လူတော်တော်များများ ကူးစက်လာတဲ့အခါ ကူးစက်သူတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အတွက် အစိုးရက ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေချထားမလဲ…။ အဲ့ဒီရန်ကနေလွတ်မြောက်အောင် ရဲမှူး၊ သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ သူ့လက်ထောက်တို့ ဘယ်လိုရုန်းကန်ကြိုးစားကြမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပေးပါဦးရှင့်…။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မြောက်ကိုရီးယား နဲ့အမေရိကန်တို့ စစ်ပွဲကာလမှာမြောက်ကိုရီးယားဘက်က အဝေးထိန်းဒုံးကျည်တွေစတင်တီထွင်ပြီးပြီလို့ သတင်းရပီးနောက်မှာအမေရိကန်ဘက်က ရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့ မြောက်ကိုးရီးယား ဒုံးကျည်ကိုသွားဖျက်စီး တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Aurora သင်္ဘောကပ္ပတိန်က မတ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲကအကျွမ်းကျင်ဆုံးကပ္ပတိန် တစ်ယောက်ပါ။ရေဒါခံလို့မရတဲ့ သင်္ဘောမှ မြောက်ကိုရီးယားရေတပ်ထဲဝင်လို့ရမှာဖြစ်လို့ တစ်စီးထဲကျန်တဲ့ စစ်သုံးသင်္ဘော Aurora အကြောင်းကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းမှာ မတ်စ်နဲ့ ကျန်တဲ့အဖွ့ဲဝင်တွေကမြောက်ကိုရီးယားရေပိုင်နက်ထဲသွားပီးဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးကိုဘယ်လိုဖျက်စီးကြမလဲဘယ်လိုတွေပူးပေါင်းပီး လုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာ….ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့လိုက်ပာခံစားချင်သူတွေအကြိုက်တွေ့မယ့်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်….
လူကြိုက်များတဲ့ ဆယ်လီ စတားတစ်ယောက်ဟာဘွဲယူခါနီးenglishတစ်ဘာသာကျလို့ ဘွဲ့မရဖြစ်တော့မယ့်အနေအထားမှာဆရာကအတန်းပြန်တက်ပြီးစာမေးပွဲပြန်ဖြေဖို့အတွက်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ ပြန်တက်ရမယ့်အခန်းက သရဲတွေညတိုင်းခြောက်နေတဲ့အခန်း ဖြစ်နေလို့အတန်းအတွက်တူတူတက်ဖို့လူစုရတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲသူတို့တွေအတန်းတက်လို့ရောရမှာလား ဘွဲ့ယူဖို့ရောအဆင်ပြေကြပါ့မလားအခုကားလေးကသရဲကားဆိုပေမယ့်ထိုင်းသရဲကားတွေအတိုင်းဟာသလေးရောထားတာမို့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘဲရယ်နေရမှာပါပြီးတော့ဘွဲယူကျမယ့်ရာသီလည်းနီးနေပြီဆိုတော့ ဒီကားလေးကြည့်ပြီးကျောင်းကြီးကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်လွမ်းဖြစ်မယ်လို့လဲထင်တာကြောင့် ကြည့်ရှုအားပေးကြပါစို့နော်
CM ရဲ့ horror, dark and supernatural အမျိုးအစားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကား မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ June 6, 1976 မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး Box Office ဝင်ငွေ $ 60.9 သန်း တောင်ရရှိထားတာဆိုတော့ ကောင်းမယ်ဆိုတာ သေချာပြီးသားပါနော်။ သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားတွေအဖြစ်လဲ ၄ကား ထပ်မံထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။ ရောမမြို့မှာ Robert Thorn နဲ့ သူ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ကလေးလေးက မွေးဖွားပြီးချင်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Robert Thorn က သူ့အမျိုးသမီးကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်တဲ့အတွက် မွေးဖွားပြီးချင်း အမေသေဆုံးခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို သူတို့ကလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ သူ့နာမည်က Damien ပါ။ သူ့အမျိုးသမီးကတော့ ဒီအကြောင်းတွေ မသိခဲ့ပါဘူး။ နှစ်တွေကြာပြီးနောက် Damienလေးရဲ့ မွေးနေ့တစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့ကလေးထိန်းက မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး တိုက်ပေါ်ကခုန်ချသတ်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့ သူတို့မိသားစုဆီ ကလေးထိန်းအသစ်ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီကလေးထိန်းနဲ့ Damien ကြား ဘယ်လိုပတ်သက်မှုတွေရှိမလဲ။ Damien ရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းတွေက ဘာတွေဖြစ်နေမလဲ။ Robert Thorn တို့မိသားစု ဘယ်လိုကိစ္စတွေ ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာ တစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာကြည့်ရှုရမဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားမို့ CM ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟော်ရာ ရုပ်ရှင်အသစ်လေး ကြည့်ရအောင်။IT ရုပ်ရှင်ထဲက ကလေးသရုပ်ဆောင်လေးလည်း ပါပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း – သားတစ်ယောက် သမီး ၁ ယောက် ရှိတဲ့လင်မယား ၂ ယောက်ဟာ ကွာရှင်းဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ခင်ပွန်းဖြစ်သူက နောက်မိန်းမလည်း ယူတော့မယ့် အခြေအနေမှာ မိန်းမဖြစ်သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားခဲ့တယ်။နောက်မိန်းမကလည်း ငယ်ငယ်တုန်းက တစ်မိသားစုလုံးဘာသာရေးအစွန်းရောက်ပြီး သတ်သေသွားခဲ့တဲ့မိသားစုရဲ့ တစ်ဦးတည်းကျန်ခဲ့တဲ့သူပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ ခရစ္စမတ်အတွက် တောင်ကုန်းတွေပေါ်ကအိမ်ကလေးတစ်လုံးမှာ ကလေး ၂ ယောက်ရယ် မိထွေးလောင်းရယ်အချိန်အတူကုန်ဆုံးဖို့ ကြုံလာခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ သရဲလေလား၊ လူလေလား၊ဘယ်သူက သေပြီးဘယ်သူက ရှင်နေတာလဲဆိုတော့ပဟေဠိတွေနဲ့ ကြောက်စရာတွေ ကြုံလာရပါတော့တယ်။
DreamKatcher 2020 ခုလို မိုးအေးအေးမှာ Coffer ပူပူလေးတစ်ခွက်နဲ့ သရဲကား ကောင်းကောင်းလေး ကြည့်လိုက်ရရင် ဘယ်လောက် အရသာရှိလိုက်မလဲနော်။ အဲ့တာကြောင့် သရဲကား အသစ်စက်စက်ကလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ လူမျိုးတိုင်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ မကောင်းတဲ့ဝိညဉ်ဆိုးတွေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ အရာဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ Dreamcatcher ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ နတ်ဆိုးအကြောင်းပါ။ မိတဆိုးလေးဖြစ်နေတဲ့ ဂျော့ခ်ျကို သူ့အဖေ လူကီက အဖေပီသစွာနဲ့ပဲ ဂေးလ်ဆိုတဲ့ ကလေးစိတ်ရောဂါကုတဲ့ပမျိုးသမီးနဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်။ သားအပေါ် သိတတ်လိုက်တဲ့အဖေ။ မိထွေး ဆိုပေမယ့် ဂေးလ်က ဂျော့ခ်ျအပေါ် ကောင်းရှာပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ မကောင်းတာက လင်ပါသား ဂျော့ခ်ျပဲ။ မိထွေးကို သူ့အမေ နေရာကို လုပါတယ်ဆိုပြီး အငြိုးအတေးထားတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဂျော့ခ်ျက သူ့အမေ ဘက်ကီကို ညတိုင်းအိမ်မက်မယ်တယ်။ သူ့အမေက သူ့ကို အိမ်မက်ထဲကနေ ချော့ပြီးခိုင်းတာပေါ့။ တစ်နေ့ သူတို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်း ရုသ် ရဲ့ ဂိုဒေါင်ထဲကနေ ဂျော့ခ်ျက ပစ္စည်းတစ်ခုကို ခိုးလာတယ်။ အဲ့ပစ္စည်းက အိမ်မက်တံခွန်လို့ခေါ်တဲ့ Dreamcatcher ပါပဲ။ အဲ့ Dreamcatcher က သာမန်မဟုတ်ပဲ နတ်ဆိုးကပ်နေတဲ့ပစ္စည်း ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့မိသားစု အနေနဲ့ ဘာတွေကြုံတွေ့ရပြီး မိထွေးနဲ့ လင်ပါသားကကော ငြိမ်းချမ်းရေးယူနိုင်ကြမလား ဆိုတာကိုတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ကြည့်ရမှာပါ။
ဆာရာဆိုတဲ့​ကောင်မ​လေးဟာ သူမအ​မေနာမကျန်းဖြစ်​နေစဥ်မှာ အ​ဖေဖြစ်သူက ​သူနာပြုဆရာမနဲ့ ​ဖောက်ပြန်​နေတာကို သိပြီး​နောက်မှာ စိတ်ဒုက္ခ​ရောက်ခဲ့ရသူပါ။ အ​မေဖြစ်သူဆုံးပြီး​နောက်မှာ သူမရဲ့ အိပ်မက်​တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ နာကျင်ဖွယ်အတိတ်ကိုစွန့်ခွာပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့ LA မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုဆီ​ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တိုက်ခန်းက အိမ်​မွေးတိရစ္ဆာန်​တွေကို ခွင့်မပြု​ပေမယ့် သူမက​တော့ သူ့​ကြောင်​​လေးကို အိမ်နီးချင်း​တွေမသိ​အောင် ​မွေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်​ပြောင်းပြီး မကြာခင်မှာပဲ အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့အပြင်ထူးဆန်းတဲ့ဆူညံသံများနဲ့ ခြိမ်းခြောက်တဲ့စာ​တွေကြောင့်စိတ်သောကရောက်ခဲ့ရပြီး သူမရဲ့ဘဝသစ်လည်း လျင်မြန်စွာပျက်ပြားသွားခဲ့ရပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမှန်တရားကိုသူသိသွားတဲ့အချိန်မှာ​တော့ သိပ်နောက်ကျသွားပါပြီ။ သူမရဲ့ အိမ်နီးချင်း​တွေဟာ စသိခါစက သိပ်​ဖော်​ရွေသ​လောက် အခုသူမကို အစွန်း​ရောက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဆီ သွတ်သွင်းဖို့ ကြိုးစားသူ​တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ သူမဟာ နဂိုကတည်းက အထီးကျန်စိတ်ပျက်အားလျော့မှု​တွေက​နေ စိတ်ခွန်အားကိုရှာ​တွေ့မလား ဒါမှမဟုတ် အဲ့မှာပဲ ထာဝရပိတ်မိ​နေမလားဆိုတာကို​တော့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်ကြည့်ရှုကြရမှာပါ။